ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချရတဲ့အခါ… -
Posted on January 9, 2019 January 9, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဆိုတာ အဖြေကောင်းတွေထဲက အကောင်းဆုံးအဖြေကို ရွေးထုတ်ရတဲ့ သဘောပါပဲ…
ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုတာ အင်မတန်မှရှုပ်ထွေးပြီး ထည့်စဉ်းစားရမယ့် အချက်တွေ၊ ကြိုတွေးပြီး ပူပန်ရမယ့် အချက်တွေ၊ အကယ်၍ မှားခဲ့ရင် ပြန်ရလာမယ့် အကျိုးဆက်တွေ စသည်ဖြင့် အားလုံးကို စဉ်းစားတွက်ချက်ပြီး အဆိုးနဲ့အကောင်း နှစ်ခုထဲမှာမှ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ပိုအလေးသာနိုင်မယ့် အရာတွေကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နှင်းရဲ့ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံး ချလိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အသက် ၁၈ ပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အိမ်ကိုတွန်းတိုက်ပြီး အလုပ်လုပ်တာပါပဲ။ မိသားစုက ချထားတဲ့ပုံစံခွက်ဆိုတာ နှင်းအတွက် တော်တော်လေးကို ဘောင်ကျဉ်းပြီး အဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့ အနေအထားပေါ့။ အဲဒီတော့ အဝေးသင်တက်ရင်း ဒီအတိုင်းမနေချင်ဘူးဆိုပြီး တဂျီဂျီပူဆာတော့ အမေက နိုင်ငံခြားကို ကျောင်းတက်ဖို့ ပို့မလိုလို၊ ဒီပလိုမာတန်းတစ်ခုကိုပဲ ချက်ချင်းတက်ခိုင်းတော့မလိုလို ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်နဲ့ ဘာမှလည်းဆက်မဖြစ်၊ စိတ်ဓာတ်တွေကျပြီး လူကအလူးအလဲခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာ Freelance အလုပ်လေးတစ်ခုတွေ့လို့ လာလျှောက်ရင်းကနေ လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်သွားတာပဲ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်လေးတွေကိုလုပ်ရင်း လူပင်ပန်းပေမဲ့ စိတ်ချမ်းသာရတော့ ပျော်ရတာပဲလေ..
Related Article >>> ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် နားလည်နိုင်ဖို့ ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် သိလာဖို့ ဘာတွေကို ပြင်ဆင်ရမလဲ?
အဲဒီတော့ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချလိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက ဘယ်လိုတွေ အဆင့်ဆင့်လုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ အမှန်တိုင်းပြောရရင် ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး မစဉ်းစားခဲ့ဘူးရယ်။ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန် အလုပ်တွေ့တယ်၊ ကောက်လုပ်လိုက်တယ် ဒီလောက်ပဲ။
တကယ်တမ်းကျတော့ အဲ့လိုတုံးတိုက်တိုက်ကျားကိုက်ကိုက်နဲ့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံမယ်ဆိုပြီး ဘာမှမစဉ်းစားဘဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နည်းလမ်းက မကောင်းဘူး ယောင်းရဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယ်အလုပ်မှာမဆို အနည်းဆုံး ၁ နှစ်လောက်မြဲနေမှ ကိုယ့် CV က လှတာလေ။
အလုပ်ဖြစ်ရင်ပြီးရော ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဆိုတာမျိုးက တကယ်တမ်း ကိုယ်ဝါသနာပါတာနဲ့ မကိုက်ရင် တော်တော်စိတ်ဆင်းရဲရမှာ။ နှင်းကတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ ပထမဆုံးအလုပ်မှာ ကောင်းကောင်းလေးပဲ အတွေ့အကြုံယူရင်း ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။ ပျော်ရတယ်ပေါ့ ယောင်းရယ်။
အဲဒီမေးခွန်းအတွက် နှင်းကိုယ်တိုင်မှာလည်း အဖြေမရှိဘူးသိလား… ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရင်ဆိုင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ တကယ်တမ်း အရမ်းခက်ခဲလာတဲ့အခါမှာ ဘာမှ ကြိုပြီး မပြင်ဆင်ထားခဲ့တာမို့ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တော်တော်လေး ထိခိုက်သွားမယ်လို့ ထင်တာပဲ။
အဲဒီတော့ ယောင်းတို့တွေ အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင်
စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အချိန်တိုတွင်း ကမူးရှူးထိုး ဘယ်တော့မှ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့နော်။
စိတ်ကိုအေးအေးထားပြီး ကောင်းကျိုးတင်မကဘဲ ဆိုးကျိုးကိုပါမြင်အောင်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်အတွက် ကောင်းကျိုးပိုများမယ့် လမ်းကို ရွေးပါ။
ကိုယ့်ဆန္ဒ၊ ကိုယ့်ရင်ထဲက ခံစားချက်ကိုလည်း နားထောင်ကြည့်ပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးကိုလည်း ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။
Related Article >>> ကိုယ်မဖြေချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ မေးလာတဲ့အခါ ဘယ်လို ရှောင်ကြမလဲ
နောက်ပြီး ကိုယ့်ထက် စီနီယာကျတဲ့လူတွေ ကိုယ့်အခြေအနေကို ကြုံခဲ့တုန်းက ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကို လိုက်မေးစမ်းကြည့်ပြီး သူတို့အဖြေတွေထဲကနေလည်း ကိုယ့်အတွက်အဖြေကို ရှာလို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး ကိုယ်က ဆုံးဖြတ်ပြီးမှ နောင်တရနေရတယ်ဆိုရင်လည်း ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ထဲကနေ ဘယ်လိုအမြတ်ထွက်မလဲဆိုတာကို ပြန်လိုက်ရှာပြီး အဆိုးထဲက အကောင်းကို ရအောင်ယူပါ။ ပြီးတော့ နှင်းတို့သူဌေးပြောနေကျ စကားအတိုင်း ‘ကမ္ဘာပေါ်မှာ အမှားဆိုတာမရှိဘူး၊ ငါဒီထက်ပိုကောင်းအောင် လုပ်ခဲ့ရမှာ’ ဆိုတာမျိုးပဲ ရှိတာမို့ အမှားလို့ မသတ်မှတ်ဘဲ ကိုယ်လုပ်ခဲ့ပြီးသားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲ ပိုကောင်းအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လုပ်ပါ။
ကိုယ့်နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောက်ကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းရင်း အကောင်းဆုံးသော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချနိုင်ပါစေလို့ နှင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်…
ဆုံးဖွတျခကျြခတြယျဆိုတာ အဖွကေောငျးတှထေဲက အကောငျးဆုံးအဖွကေို ရှေးထုတျရတဲ့ သဘောပါပဲ…
ဘဝရဲ့အရေးကွီးတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှဆေိုတာ အငျမတနျမှရှုပျထှေးပွီး ထညျ့စဉျးစားရမယျ့ အခကျြတှေ၊ ကွိုတှေးပွီး ပူပနျရမယျ့ အခကျြတှေ၊ အကယျ၍ မှားခဲ့ရငျ ပွနျရလာမယျ့ အကြိုးဆကျတှေ စသညျဖွငျ့ အားလုံးကို စဉျးစားတှကျခကျြပွီး အဆိုးနဲ့အကောငျး နှဈခုထဲမှာမှ ကောငျးတဲ့အခကျြတှေ ပိုအလေးသာနိုငျမယျ့ အရာတှကေို ဖမျးဆုပျလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ။
နှငျးရဲ့ဘဝမှာ ပထမဦးဆုံး ခလြိုကျတဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြက အသကျ ၁၈ ပွညျ့ပွီးတဲ့အခြိနျမှာ အိမျကိုတှနျးတိုကျပွီး အလုပျလုပျတာပါပဲ။ မိသားစုက ခထြားတဲ့ပုံစံခှကျဆိုတာ နှငျးအတှကျ တျောတျောလေးကို ဘောငျကဉျြးပွီး အဓိပ်ပာယျမရှိတဲ့ အနအေထားပေါ့။ အဲဒီတော့ အဝေးသငျတကျရငျး ဒီအတိုငျးမနခေငျြဘူးဆိုပွီး တဂြီဂြီပူဆာတော့ အမကေ နိုငျငံခွားကို ကြောငျးတကျဖို့ ပို့မလိုလို၊ ဒီပလိုမာတနျးတဈခုကိုပဲ ခကျြခငျြးတကျခိုငျးတော့မလိုလို ဟိုယောငျယောငျဒီယောငျယောငျနဲ့ ဘာမှလညျးဆကျမဖွဈ၊ စိတျဓာတျတှကေပြွီး လူကအလူးအလဲခံစားနရေတဲ့အခြိနျမှာ Freelance အလုပျလေးတဈခုတှလေို့ လာလြှောကျရငျးကနေ လုပျငနျးခှငျထဲရောကျသှားတာပဲ။ လုပျငနျးခှငျထဲရောကျတဲ့အခါကတြော့ ကိုယျဝါသနာပါတဲ့ အလုပျလေးတှကေိုလုပျရငျး လူပငျပနျးပမေဲ့ စိတျခမျြးသာရတော့ ပြျောရတာပဲလေ..
Related Article >>> ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ နားလညျနိုငျဖို့ ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျ သိလာဖို့ ဘာတှကေို ပွငျဆငျရမလဲ?
အဲဒီတော့ ဒီဆုံးဖွတျခကျြကို ခလြိုကျတဲ့အခြိနျတုနျးက ဘယျလိုတှေ အဆငျ့ဆငျ့လုပျခဲ့လဲဆိုတော့ အမှနျတိုငျးပွောရရငျ ဘာမှ ထှထှေထေူးထူး မစဉျးစားခဲ့ဘူးရယျ။ စိတျဓာတျကနြတေဲ့အခြိနျ အလုပျတှတေ့ယျ၊ ကောကျလုပျလိုကျတယျ ဒီလောကျပဲ။
တကယျတမျးကတြော့ အဲ့လိုတုံးတိုကျတိုကျကြားကိုကျကိုကျနဲ့ ဘာပဲဖွဈဖွဈခံမယျဆိုပွီး ဘာမှမစဉျးစားဘဲ ဆုံးဖွတျခကျြခတြဲ့နညျးလမျးက မကောငျးဘူး ယောငျးရဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘယျအလုပျမှာမဆို အနညျးဆုံး ၁ နှဈလောကျမွဲနမှေ ကိုယျ့ CV က လှတာလေ။ အလုပျဖွဈရငျပွီးရော ဘာပဲလုပျရလုပျရဆိုတာမြိုးက တကယျတမျး ကိုယျဝါသနာပါတာနဲ့ မကိုကျရငျ တျောတျောစိတျဆငျးရဲရမှာ။ နှငျးကတော့ ကံကောငျးစှာနဲ့ ပထမဆုံးအလုပျမှာ ကောငျးကောငျးလေးပဲ အတှအေ့ကွုံယူရငျး ဖွတျသနျးခဲ့ရတယျ။ ပြျောရတယျပေါ့ ယောငျးရယျ။
အဲဒီမေးခှနျးအတှကျ နှငျးကိုယျတိုငျမှာလညျး အဖွမေရှိဘူးသိလား… ဘာပဲဖွဈဖွဈ ရငျဆိုငျမယျလို့ ဆုံးဖွတျခဲ့ပမေဲ့ တကယျတမျး အရမျးခကျခဲလာတဲ့အခါမှာ ဘာမှ ကွိုပွီး မပွငျဆငျထားခဲ့တာမို့ စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာမှာ တျောတျောလေး ထိခိုကျသှားမယျလို့ ထငျတာပဲ။
အဲဒီတော့ ယောငျးတို့တှေ အရေးကွီးကိစ်စတဈခုခုကို ဆုံးဖွတျတော့မယျဆိုရငျ
စိတျလိုကျမာနျပါ ဘာပဲဖွဈဖွဈခံမယျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ အခြိနျတိုတှငျး ကမူးရှူးထိုး ဘယျတော့မှ မဆုံးဖွတျပါနဲ့နျော။
စိတျကိုအေးအေးထားပွီး ကောငျးကြိုးတငျမကဘဲ ဆိုးကြိုးကိုပါမွငျအောငျကွညျ့ပွီး ကိုယျ့အတှကျ ကောငျးကြိုးပိုမြားမယျ့ လမျးကို ရှေးပါ။
ကိုယျ့ဆန်ဒ၊ ကိုယျ့ရငျထဲက ခံစားခကျြကိုလညျး နားထောငျကွညျ့ပွီး ကိုယျဖွဈခငျြတာလေးကိုလညျး ဦးစားပေးသငျ့ပါတယျ။
Related Article >>> ကိုယျမဖွခေငျြတဲ့ မေးခှနျးတှေ မေးလာတဲ့အခါ ဘယျလို ရှောငျကွမလဲ
နောကျပွီး ကိုယျ့ထကျ စီနီယာကတြဲ့လူတှေ ကိုယျ့အခွအေနကေို ကွုံခဲ့တုနျးက ဘယျလိုကြျောဖွတျခဲ့လဲဆိုတာတှကေို လိုကျမေးစမျးကွညျ့ပွီး သူတို့အဖွတှေထေဲကနလေညျး ကိုယျ့အတှကျအဖွကေို ရှာလို့ရပါတယျ။
နောကျဆုံး ကိုယျက ဆုံးဖွတျပွီးမှ နောငျတရနရေတယျဆိုရငျလညျး ဒီဆုံးဖွတျခကျြထဲကနေ ဘယျလိုအမွတျထှကျမလဲဆိုတာကို ပွနျလိုကျရှာပွီး အဆိုးထဲက အကောငျးကို ရအောငျယူပါ။ ပွီးတော့ နှငျးတို့သူဌေးပွောနကြေ စကားအတိုငျး ‘ကမ်ဘာပျေါမှာ အမှားဆိုတာမရှိဘူး၊ ငါဒီထကျပိုကောငျးအောငျ လုပျခဲ့ရမှာ’ ဆိုတာမြိုးပဲ ရှိတာမို့ အမှားလို့ မသတျမှတျဘဲ ကိုယျလုပျခဲ့ပွီးသားဆုံးဖွတျခကျြကိုပဲ ပိုကောငျးအောငျ အတတျနိုငျဆုံး လိုကျလုပျပါ။
ကိုယျ့နှလုံးသားနဲ့ ဦးနှောကျကို ဟနျခကျြညီအောငျ ထိနျးရငျး အကောငျးဆုံးသော ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခနြိုငျပါစလေို့ နှငျး ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော…
Tagged decision, important, ways
Comfort zone အပြင်ဘက်သို့ ခြေတစ်လှမ်း
Posted on March 5, 2019 March 5, 2019 Author Stella
ဒီတိုင်းပဲ comfort zone ထဲမှာ ဆက်နေနေမှာလား ?
လူတွေကြားမှာ ရဲရင့်ထင်ပေါ်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၅)ခု
Posted on March 24, 2018 Author Hnin Ei Oo
တစ်ယောက်တည်း ခွဲနေတတ်တဲ့ ယောင်းလေးတို့အတွက် အက်ဒ်မင် လူတတ်လေး လုပ်လိုက်ပါတယ်လို့ 😛
Knowledge Letters From the Heart
တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာ ၁၁ သန်း ရှာနိုင်တဲ့ ခြောက်နှစ်သားလေး
Posted on December 14, 2017 Author Khine
ကလေးတစ်ယောက်က အရုပ်တွေကို ရီဗျူးလုပ်ပေးရင်း ပိုက်ဆံတွေရနေတယ်ဆိုတော့ ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ် ဘယ်မှာရှိဦးမှာလဲ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး BL စီးရီးစ် Innocence ရဲ့ အဓိကဇာတ်ကောင် မြူခိုးက ဘယ်သူလဲ?